गरीबीबाट ग्रस्त कोमोरोज कसरी पर्यटन कोषका लागि billion अर्ब डलर उठाए?
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » निवेश » गरीबीबाट ग्रस्त कोमोरोज कसरी पर्यटन कोषका लागि billion अर्ब डलर उठाए?
ब्रेकिंग यात्रा समाचार • कोमोरोस ब्रेकिंग न्यूज • निवेश • समाचार • पर्यटन • यात्रा गन्तव्य अपडेट • यात्रा तार समाचार • अहिले प्रचलनमा • विभिन्न समाचार
यो कोमोरोजको देश is टापुहरू मिलेर बनेको छ: नगाजिडाजा, मावाली, र एनड्जौनी। विश्व बैंकका अनुसार कुल जनसंख्याको345 प्रतिशत जति गरीबीको रेखामुनि छन्।
अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवा, गरीब शिक्षा, र बढ्दो जनसंख्या कोमोरोज गरीबी दरमा मुख्य योगदान पुर्‍याउने कारकहरू हुन्। यो विश्वको सबैभन्दा कम विकसित देशहरू मध्ये एक हो, २०१ Global ग्लोबल हंगर इंडेक्समा पछिल्ला तेस्रो स्थानमा छ।
त्यसो भए कसरी भयो कोमोरोस हिन्द महासागर टापुमा रणनीतिक आयोजनाहरू विकास गर्न यसको अर्थतन्त्रको आकारको भन्दा तीन गुणा बढीको an अरब डलर raiseण जुटाउने हो?
यस हप्ता पेरिसमा भएको एक बैठकमा लगानी, debtण र चन्दामा लगानी जुटाइएको थियो, परराष्ट्र मन्त्री सउफ मोहम्मद अल-अमीनले विवरण नदिए एका पाठ सन्देशमा भने।
राष्ट्रपति अजाली अस्मान्मीले आफ्ना अधिकारीहरुलाई पूर्वाधार र पर्यटनमा लगानीको साथ १.२ बिलियन डलरको अर्थव्यवस्था बृद्धि गर्न कोष खोज्न नेतृत्व गरे, अर्थमन्त्री हौमेड मसादीले भनेका थिए। मोजाम्बिक र मेडागास्करको बीचमा asc1.2०,००० व्यक्तिको एउटा द्वीपसमूह कोमोरोज पनि अप्रिलमा चक्रवात केनेथले गर्दा भएको क्षति पछि पुनर्निर्माण गर्दैछ।
पर्यटन उद्योगको विकास गरेर आंशिक आर्थिक बृद्धि गर्ने वाचा गरेपछि अस्मानीले मार्चमा दोस्रो कार्यकाल जितेका थिए। पेरिस सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएका अन्य परियोजनाहरूमा ऊर्जा, सडक र विश्वविद्यालय अस्पतालको निर्माण शामिल छ।
बैठकमा होस्टिंग फ्रान्सेली सरकारका साथै चीन, जापान र इजिप्टका प्रतिनिधिहरू पनि उपस्थित थिए। साउदी र कुवेत कोष, विश्व व्यापार संगठन र अरब राज्यहरूको लिगले कोष प्रतिबद्धता गरे।
कोमोरोज विश्वको सबैभन्दा ठूला उत्पादक इल y यलlang उत्पादन गर्ने देश हो, अत्तरमा प्रयोग गरिएको सार, जुन २०१ clo मा लौंग र भेनिलाको साथसाथै यसको of ०% को निर्यात रहेको कोमोरियन केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।
कोमोरोजमा सबै आगन्तुकहरूलाई भिसा लिन आवश्यक छ। कुनै पनि देशका नागरिकहरूले आगमनमा भिसा लिन सक्दछन्।